Pankreas Anatomy sy Function
Ny pancreas dia tendrony marefo sy maharitra, hita ao amin'ny faritra ao ambony ratra ao amin'ny vatana. Izy io dia singa iray amin'ny rafitra endocrine sy ny rafi-pandaminana . Ny pancreas dia dongom-barotra izay manana ny asany ivelany sy ny endocrine. Ny ampahany exocrine ao amin'ny pancreas dia manafina enzymes digestive, fa ny segondra amin'ny endriky ny pancreas dia mamokatra hormones.
Pankreas Location sy Anatomy
Ny pancreas dia miha-henjana ary manitatra miandalana amin'ny kibony ambony. Izy io dia misy loha, vatana, ary taila. Ny faritra afovoany lehibe dia miorina eo amin'ny ilany ankavanana amin'ny kibo, ao anaty boribory amin'ny ampahany ambony amin'ny tsinay kely fantatra amin'ny hoe duodenum. Ny faritra matevina kokoa ao amin'ny pancreas dia miparitaka ao ambadiky ny vavony . Avy amin'ny vatan'ny fangaron'ny pancreas, dia manitatra ny taolam-paty any amin'ny ilany havia eo amin'ny kibony.
Ny pancreas dia mifototra amin'ny rongony ary ny rafitra fantsom-pandrosoana mandalo manerana ny taova. Ny ankamaroan'ny vatan'ny glandular dia ahitana sela ekosey antsoina hoe sela acinar . Nivondrona ny sela acinar mba hamorona climates antsoina hoe acini . Manaisotra enzymes digestive i Acini ary manafaka azy ireo amin'ny kapa manodidina azy. Ny fantsom- pita dia manangona ny enzyme misy ranon-tsavoka ary mamoaka azy ao amin'ny lakandrano maintin'ny pancreatic . Ny lakandrano fanaon'ny pancreatic dia mamakivaky ny afovoan'ny fantsona ary mitambatra miaraka amin'ny vala mangatsiaka alohan'ny hidirany ao anaty lavaka fanasitranana. Ampahany kely amin'ny sela pancreatic ihany no sela endocrine. Ireo sela goavam-be ireo dia antsoina hoe ampahatelon'ny Langerhans ary mamokatra sy manasitrana hormones. Ny nosy dia voahodidin'ny vavahadin- tsoavaly , izay mitatitra haingana ireo hormones ao amin'ny rà.
Ny fonosana dia manana tanjona roa lehibe. Ny cellules exocrine dia mamorona enzymes digestive hanampy amin'ny digestion ary ny cellules endocrine dia mamorona hormones ho an'ny fizika metabolism. Ny enzyme pancreatic avy amin'ny sela acinar dia manampy amin'ny famadihana proteinina , voamadinika ary fetsy . Ny sasany amin'ireto angom-panadinana ireto dia:
Ny proteinina pancreatic (trypsin sy chymotrypsin) - ny protez ny dipoavatra ho lasa ambany asine amino .
Pankreas amylase - manampy amin'ny fandefasana karbôrida.
Pancreatic lipase - manampy amin'ny fitsaboana matavy.
Ny sela endocrine ao amin'ny pancreas dia mamokatra hormones izay mifehy ny zavatra metabolic sasany, tafiditra ao anatin'izany ny fanamafisana ny siramamy sy ny fitsaboana. Ny sasany amin'ireo hormones novokarin'ny ampahatelon'ny cellules Langerhans dia ahitana:
Ny insuline - mampihena ny fifindran'ny glucose ao amin'ny ra .
Glucagon - mampitombo ny fifindran'ny glucose ao amin'ny ra.
Gastrin - manentana ny tsiambaratelo azomangan'ny tsiranoka mba hanamafisana ny famoahana ao amin'ny vavony.
Pankreas Hormon and Enzyme Regulation
Ny famokarana sy ny famoahana hormones sy enzymes pancreatic dia tarihin'ny rafi-pandrefesana sy ny hormones ho an'ny gastrointestinal. Ny neurons amin'ny rafi-pitabatabana mahazatra dia manandratra na manakana ny famotsorana ireo hormones sy ny enzymes digestive mifototra amin'ny tontolo iainana. Ohatra, rehefa misy ny sakafo ao amin'ny vavony, dia miteraka famantarana ny pancreas mba hampitombo ny sekretera ny enzymes digestive. Manandratra ny pancreas koa izy ireny mba hanafahana insuline mba hahafahan'ny sela mahazo ny glucose azo avy amin'ny sakafo voaaro. Ny rafitra gastrointestinal ihany koa dia manafina hormones izay mifehy ny fihenam-bidy mba hanampiana ny dipoavatra. Ny holey cholecystokinin (CCK) dia manampy amin'ny fampiakarana ny fihenan'ny enzymes digestive amin'ny fluid pancreatic, raha ny sekretera kosa mametraka ny pH nivoan'ny sakafo voapoizina ao amin'ny lavaka fanasitranana ka mahatonga ny pancreas hanakanana ny jiaka mahavelona izay manankarena bikarbonat.
Sary mikarantsara mikirakira elektronika (SEM) amin'ny sela homamiadan'ny pancreatic. Ny karbôbs (nodules) ao amin'ny sela dia toy ny sela homamiadana. Ny kanseran'ny pancreatic dia matetika tsy miteraka soritr'aretina raha tsy miorina tsara sy tsy azo ovaina. STEVE GSCHMEISSNER / Science Photo Library / Getty Images
Noho ny anjara asany amin'ny digestion sy ny asany amin'ny endriky nyndrony dia mety hisy fiantraikany goavana ny fahasimban'ny pancreas. Ny aretina mahazatra eo amin'ny pancreas dia ahitana ny pancreatitis, ny diabeta, ny tsy fahampian-tsakafo (EPI), ary ny homamiadan'ny pancreatic. Ny pancreatitis dia entin'ny pancreas izay mety hianjady (tampoka sy fohy) na maharitra (maharitra sy mitranga mandritra ny fotoana). Mitranga izany rehefa manimba ny pancreas ny siramamy sy ny enzymes. Ny antony mahazatra indrindra amin'ny pancreatitis dia vatosoa sy toaka.
Ny pancreas izay tsy miasa tsara dia mety mitarika ho amin'ny diabeta ihany koa. Ny diabeta dia fikorontanan'ny metabolika izay manamarika ny haben'ny siramamy avo lentan'ny olona. Ao amin'ny diabetika karazany 1, ny cellules pancreatic misy insuline dia simba na simba ka lasa tsy ampy ny famokarana insuline. Raha tsy misy insuline, ny sela ao amin'ny vatana dia tsy mandrisika haka glucose amin'ny ra. Ny karazana diabeta 2 dia ateraky ny fanoheran'ny sela ao amin'ny vatan'ny insuline. Ny sela dia tsy afaka mampiasa ny glucose ary ny tohin'ny siramamy mijanona ho ambony.
Ny tsy fahampian-tsakafo maneran-tany (EPI) dia aretina mitranga rehefa tsy mamokatra enzymes ampy ho an'ny digestion ny pancreas. Ny EPI dia matetika vokatry ny pancreatitis mitaiza.
Ny homamiadan'ny pancreatic dia vokatry ny fitomboan'ny sela pancreatic. Ny ankamaroan'ny sela kanseran'ny pancreatic dia mivoatra any amin'ny faritra misy ny pancreas izay mahatonga ny enzymes digestive. Ny antony lehibe mahatonga ny voan'ny kanseran'ny pancreas dia ny fifohana sigara , ny matavy ary ny diabeta.
> MIRARY fampiofanana SEER, Fampidirana ny System Endocrine. US National Institutes of Health, National Cancer Institute. Tonga any amin'ny 10/21/2013 (http://training.seer.cancer.gov/anatomy/endocrine/)
> Ny Tokony Hahafantaranao Momba ny Kanseran'ny Pancreas. National Cancer Institute. Updated 07/14/2010 (http://www.cancer.gov/cancertopics/wyntk/pancreas)
Anatomy of the kidney and function
Fampidiran-dra sy asa
Fomba ahoana no hanafahan-drà ny ra?
Rafitra fananganana olona
Manome ny Blood ho an'ny havokavoka ny Arteriolan'ny Pulmonary Main
Ny asan'ny ventricles fo
Mianara momba ny rafi-pandrefesana periferika
Fiovan'ny Teknôlôjia ho an'ny ho avy
Tetik'asa fanolorana programa-tetik'asa-C
Tatitra momba ny ady tao Issus tamin'ny 333 talohan'i JK
Theodore Roosevelt - Filohan'ny Etazonia amby roapolo
Fahitana ny Feo sy ny Olona Vitsy - Tantara Marina
Fahatakarana ny fomba fijery amin'ny literatiora
University of North Carolina ao amin'ny Pembroke Admissions
Inona no mahatonga ny tantara iray mendrika
Prolepsis, na fisainana rétroque
Ny fomba hiadiana amin'ny fanavakavahana
Fantaro ireo fototry ny fiara mateza
Kanseran'ny Skorpio sy ny fitiavana
Inona no vokany eo amin'ny vatanao?
Fampidirana ny Claves
Isograma (Word Play)
Fantaro ny zava-nitranga tamin'ny Fanjakana Empire taloha
Inona no Atao ho any amin'ny filozofia Indiana?
Inona no Fivavahana Grika?
Fomba fialana tsiny: Lazao "malahelo aho" miaraka amin'ny teny nindramina
Ny Ady Lehibe II: Konferansa Yalta
Ny Ady Lehibe II: Battle of Singapore
Ny tompon'ireo "fianakaviana fialan-tsasatra"